Ahoana ny fanamboarana ny rafitra fiasan'ny GNU / Linux? | Avy amin'ny Linux
Ahoana ny fanamboarana ny rafitra fiasan'ny GNU / Linux?
Linux Post Install | | Tutorials / Manuals / Tips
Ataovy miavaka ny GNU / Linux amin'ny Grub Customizer
Mpampiasa GNU / Linux maro no manana ny fanamby, ohatraTENA MANOKANA Ankoatry ny fampiasana azy amin'ny tanjona manokana izay nofidian'izy ireo ho ny Operating System, afaka manamboatra ny Distro araka izay azo atao mba hampisehoana ny maha-marobe sy matanjaka voalaza fa Free Operating System manoloana ireo tsy miankina.
Ny Distro tsirairay dia samy manana ny fampiharana sy ny tetika manokana hanamboarana azy amin'ny fomba mahomby sy mahomby indrindra fa misy maro izay iraisana ary hita ao anatin'ny trano fitahirizan-tsoratr'izy ireo tsirairay avy. Amin'ity boky ity dia hiezaka izahay ny hanonona sy hanazava ny tena malaza sy be mpitia indrindra ho an'ny Distros rehetra, mba hanohanana ireo mpampiasa rindrambaiko maimaim-poana sy ny tontolon'ny GNU / Linux hahatratra ny tanjon'izy ireo amin'ny fanaingoana sy fanatsarana ny Distros misy azy avy.
1 Ataovy miavaka ny GNU / Linux
1.1 Grub Customizer
1.2 Plymouth / DEBIAN Plymouth Manager
1.3 Login Managers
1.4 Mpitantana varavarankely
Ataovy miavaka ny GNU / Linux
Anisan'ireo Fampiharana Manokana hitantsika:
Es interface misy sary izay ahafahantsika mitantana ny menus boot an'ny rafitra GRUB2 / BURG an'ny GNU / Linux Operating Systems. Noforonin'i Daniel Ritcher handeha ho an'ny 5.0.8 version ary apetraka ao anatin'ny en Launchpad. Ity fampiharana ity dia mamela antsika, ankoatry ny zavatra hafa:
To move, mamafao na omeo anarana ny rakitra an-boot avy amin'ny menio GRUB,
Amboary ny atin'ny menio na mamorona firaketana boot vaovao,
Ampandehano ny fametrahana indray ny Boot Manager amin'ny Master Boot Record (MBR),
Amboary ny rafitra Operating default mba hihazakazanao amin'ny fanombohana,
Tantano ny masontsivana sasany,
Amboary ny sary background GRUB ary loko miloko menio boot.
Fandaharana mitovy na mitovy: Startupmanager, KGRUBEditor y SuperBootManager.
Plymouth / DEBIAN Plymouth Manager
Plymouth dia programa iray hafa ho an'ny fitantanana ny fanombohana ny Operating System mifantoka amin'ny fanomezana maody sary eo am-panombohana ny Operating System, izany hoe mamela ny fampisehoana sary mihetsika na static fa tsy ny maody an-tsoratra (fisehoana ny hafatra fanombohana) izay miseho rehefa manomboka ny solosaina.
Amin'ny rafitra sasany toa an'i Ubuntu na Mint dia apetrakao amin'ny alàlan'ny default, ary ny sasany kosa tsy, toa ny DEBIAN. Plymouth dia programa famaranana ary DEBIAN Plymouth Manager dia sehatr'asa an-tsary ho an'i Plymouth teratany Distro MX-Linux 17.
Ity fampiharana ity dia mamela antsika, ankoatry ny zavatra hafa:
Mametraka / mamafa ireo temotra
Ovao ny lohahevitra Splash ankehitriny.
Azo ampiasaina amin'ny alàlan'ny console (Plymouth) sy / na amin'ny alàlan'ny tontolon'ny sary (DEBIAN Plymouth Manager) hanatanterahana ireo hetsika voalaza etsy ambony.
Fandaharana mitovy na mitovy: Plymouth Manager
Ny Display Manager (Display Manager / DM) fantatra koa amin'ny hoe manager loginIzy ireo dia rindranasa miaraka amina interface interface misy sary izay mampiseho ny faran'ny fizotry ny boot an'ny GNU / Linux Operating System, fa tsy ny shell default, ary mamela ny fidiran'ny User ho an'ny System indrindra.
Amin'izao fotoana izao ny ecosystem GNU / Linux Distros dia manana safidy Alternative Screen Manager tsara sy malalaka. Satria ny fahasamihafan'izy ireo dia midadasika toy ny an'ny mpitantana varavarankely sy ny tontolon'ny birao.
Ireto mpitantana ireto mazàna izy ireo dia manome ambaratongam-pahaizana manokana sy fampiasa amin'ny lohahevitra ary ny ankamaroany dia voalamina na havaozina amin'ny alàlan'ny terminal na console manova ny fisie fikirakirana.
Anisan'ireo lehibe, be mpampiasa sy be mpahalala indrindra ny:
Ny sasany amin'izy ireo dia manana, toy ny LightDM, fampiharana sary mamela ny fanodikodinany. Ho an'ny LightDM dia misy "Fandraisana interface GTK + lightDM / lightDM-gtk-greeter-setting" izay manana fizarana asa 4 izay manamora ny fanaingoana ny efijery Welcome sy ireo singa ao aminy toy ny:
Endrika ivelany: Lohahevitra, kisary, endritsoratra, Saripika ary sarin'ny mpampiasa.
Panel: Wigdets amin'ny ora, daty, fiteny ary ny fidirana amin'ny fidirana, ny fotoam-pivoriana ary ny angovo.
Window toerana: Mba hametrahana ny varavarankely izay fisoratana anarana sy ampidirin'ny mpampiasa.
hafa: Ahafahanao manamboatra ny rindranasa Accessibility default an'ny Screen Manager sy ny masontsivana fitahirizana Screen Power.
Ny hafa toa ny KDM na SDDM amin'ny alàlan'ny tontonana General Settings an'ny Desktop Environment dia azo alamina.
Fikandrana fisehon'ny rafitra fiasa Window Window
Mpitantana varavarankely Ireo no rindranasa izay ny asany dia ny fampisehoana ireo varavarankely misy ny rindrambaiko napetraka ao amin'ny Operating System ho an'ny mpampiasa, mba hahafahan'izy ireo mifanerasera mora foana.
Noho izany, ny rafitra fiasa sary rehetra dia miaraka amin'ny Window Manager izay matetika mifandray amin'ny Desktop Environment (GNOME, KDE, Plasma, XFCE, LXDE, ankoatry ny hafa) mba hamoronana ny vokany sary sy ny Windows of the System.
Anisan'ireo mpitantana Window malaza sy malaza indrindra ny:
fahazavana ara-panahy (Fahazavana)
BlackBox (KDE / Gnome)
Ary anisan'ireo tsy dia fantatra loatra sy tsy ampiasaina intsony ny:
Ny tsirairay dia samy manana ny fitaovana fikirakirany izay hamela ny tontolon'ny Desktop voafidy ho hita amin'ny fomba tokana sy manokana, mba hahafahan'ny mpampiasa tsirairay manana Distro manokana ho faran'izay betsaka!
Fikirana amin'ny Window Manager
Ary farany, mba ampanjifaina ny GNU / Linux Distro dia afaka mampiasa ny Conkys izahay ConKy Manager na dock sasany, mifidy eo amin'i Docky, AWN, Cairo Dock na olon-kafa tianao.
Amin'izany no ahafahantsika manamboatra sy manatsara ny rafitra fiasan'ny GNU / Linux.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Tutorials / Manuals / Tips » Ahoana ny fanamboarana ny rafitra fiasan'ny GNU / Linux?
Masinina Godot: ny motera sary misokatra misokatra dia mampiseho ny fihetsik'ireo mpitifitra fahatelo
HomeBank: fangatahana kaonty manokana sy maimaim-poana